अोलीको सपथ ग्रहणमा नरेन्द्र मोदी अाउने ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more अोलीको सपथ ग्रहणमा नरेन्द्र मोदी अाउने !
अोलीको सपथ ग्रहणमा नरेन्द्र मोदी अाउने !
माघ १७ गते, २०७४ - ११:०१
काठमाडाैं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फागुन अन्तिम साता नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन् । नेपालसँगको सम्बन्ध नयाँ ढंगले अघि बढाउने उद्देश्यका साथ मोदी नेपाल आउने तयारीमा जुटेका हुन् ।
पछिल्लो समय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिचको सम्बन्ध चर्चाचा छ । अब बन्ने सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका ओलीलाई मोदी आफैँले दुईपटक सम्म टेलिफोन गरेर प्रधानमन्त्रीका लागि बधाई दिदै दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
मोदी भ्रमणको गृहकार्यका सिलसिलामा भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज भोली बिहीबार काठमाडौं आउँदै छिन् । ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारीका लागि नै स्वराज नेपाल आउन लागेकी हुन् । मार्चको दोस्रो साताभित्र प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यसअघि मोदी र ओलीबिच राम्रो सम्बन्ध नभएको भन्ने चर्चा चिर्दै मोदीले ओलीसँगको सम्बन्ध निकट बनाउँदै लगेको अनुमान गर्न गारो छैन । यसबिचमा ओलीले पनि भारतको गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर मोदीलाई पत्रमार्फत शुभकामना सन्देश पठाएका छन् ।
यति मात्रै नभै मोदीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारकी विदेश मन्त्री शुष्मा स्वारजलाई नेपाल भ्रमणमा नै पठाउन लागेका छन् । स्वराजको भ्रमणलाई पनि मोदी र ओलीबिचको सम्बन्धसँग जोडेर हेरिएको छ ।
नेपालमा अब बन्ने सरकारको नेतृत्व गर्न लागेका ओली करिब फागुनको दोस्रो वा तेस्रो साता प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित जस्तै छ । सोही समय पारेर मोदी नेपाल भ्रमणमा आउने चर्चा सुरु भएको छ ।
ओलीको प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहणकै बेला मोदी आउन लागेका हुन् कि भन्ने अनुमानसमेत गर्न थालिएको छ । मोदी नेपाल आउने भनिएको समय र ओली प्रधानमन्त्री बन्ने समय मेल खाने भएकाले ओलीको सपथ ग्रहण कार्यक्रममै मोदीको उपस्थिती हुने हो कि भन्ने अनुमान गरिएको हो । ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने निधो भएपछि दुवै पूर्व समकक्षीहरूले विगतको तुष बिर्सिएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको टिप्पणीसमेत गरिन थालिएको छ ।
माघ १७ गते, २०७४ - ११:०१ मा प्रकाशित